विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
सभापति, अर्थ समिति, व्यवस्थापिका–संसद्
प्रकाश ज्वालाको जन्म २०२३ साल मङ्सिर १२ गते सल्यान जिल्लाको देवस्थल गाविसमा भएको थियो । उनले विसं २०४८ मा अङ्ग्रेजीमा बीए तथा विसं २०५२ मा एलएलबी गरेका छन् । त्यस्तै विसं २०५३ मा त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन् । उनको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी आन्दोलनबाट शुरू भएको हो । २०३५/३६ सालको आन्दोलनमा भाग लिएका ज्वालाले २०३९ सालमा नेकपा मालेको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । विसं २०५६ को निर्वाचनमा सल्यान क्षेत्र न. १ बाट र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सल्यान क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित ज्वाला अहिले अर्थ समितिको सभापतिमा छन् ।
नयाँ ऐन चाहिन्छ
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१ आधा शताब्दीभन्दा बढी अर्थात् ५३ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । राजा महेन्द्रले जारी गरेको यो ऐनलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ, प्रक्रियागत पक्ष र अन्तर्वस्तुको पक्ष ।
पहिलो विषय यो ऐन निकै पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको छ । पञ्चायत कालमा बनेको यो ऐन लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछिको अवस्थामा पनि जस्ताको तस्तै कायम रहनु उचित होइन । समय बदलियो, परिस्थिति बदलियो तर ऐन बदलिएन । कुनै पनि ऐन कानून समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जित हुँदै जान्छन् र तिनीहरूको संशोधन गरिन्छ वा नयाँ ऐन ल्याएर पुरानोलाई विस्थापित गरिन्छ । त्यसैले अब नयाँ ऐन ल्याएर २०२१ सालको थोत्रो ऐनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । दोस्रो, कुनै पनि ऐन कानून समय सापेक्ष छ कि छैन र तिनीहरू लागू भइरहेका छन् कि छैनन्, भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । एकातिर यो ऐन समयसापेक्ष छैन भने अर्कोतिर यो ऐन राम्रोसँग पालना पनि भएको देखिँदैन । ऐनले नेपाली नागरिक वा सङ्गठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यो ऐनको उल्लङ्घन गर्दै नेपालमा, नेपाली जनतासँग मुनाफा लिएर कमाएको पूँजी विदेशमा लगानी गर्ने र प्रशस्त फाइदा उठाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो ऐन लागू हुँदैन र त्यसको पालना पनि गरिँदैन भने त्यस्तो ऐन समातेर किन बसिराख्नु ? त्यसैले यो ऐनको ठाउँमा नेपालको वर्तमान संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
ऐनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लागउने’ भनेझैं साँच्चिकै नेपाल र नेपालीको हितका लागि यो ऐन समसामयिक बनाउन जरुरी छ ।
यतिबेला नेपाली नागरिक र कम्पनी वा सङ्गठित संस्थालाई नेपालमा आर्जन गरेको पूँजी विदेशमा लगानी गर्न दिनु उचित हुन्छ र हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । यो पक्षमा मत राख्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् ।
जहाँसम्म नेपालको अवस्था छ, यो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । कतिपय व्यक्ति र कम्पनीले नेपालमा नेपाली जनतासँग नाफा लिएर पूँजी आर्जन गर्ने र त्यसलाई विदेशमा लगानी गरेर धेरै फाइदा लिएका छन् । अझ नेपालको पूँजी कर नलाग्ने मुलुकहरू (ट्याक्स ह्याभेन)मा पठाउने र विदेशमा कमाएको रकमलाई तिनै मुलुकमार्फत नेपाल भित्र्याएर सेतो धन बनाउने कामसमेत भएको छ । यस विषयलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता छ । यसरी नेपालमा कमाएको पैसा बाहिर जाने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । नेपालमा पनि लगानीका प्रशस्त अवसर र सम्भावना छन् । नेपालमा आर्जित पूँजी नेपालमै लगानी भयो भने देश विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । नेपालको अर्थिक विकासमा योगदान हुन्छ र राजस्व पनि नेपालमा नै रहन्छ । त्यसैले नेपालीको पसिना विदेशमा लगाउने, विदेशमा कम्पनी खोलेर नेपालको पूँजी विदेश पलायन गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि नयाँ ऐन आवश्यक छ ।
नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्न सहज बनाउन जरुरी छ । अर्थात् कुन विषयमा विदेशमा लगानी गर्न पाउने र के कुरामा नपाउने भन्ने विषय मूर्तरूपमा आउने गरी ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि जरुरी छ । कतिपय आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू वा ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले विदेशमा लगानी गर्न सक्छन्, गरिरहेका पनि छन् । चीन, अमेरिकाजस्ता देश त विश्वमा आर्थिक आधिपत्य जमाउन र आर्थिक साम्राज्य खडा गर्न चाहन्छन् । के नेपालको अवस्था चीन वा भारतको जस्तो हो त ? कदापि होइन । त्यसैले सानो अर्थतन्त्र भएको, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न नसकेको नेपालका लागि अराजक रूपमा नेपालको कमाइ विदेशमा लगानी गरेर अकुत फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालमा नै लगानी प्रोत्साहित गर्न उक्त ऐनको ठाउँमा नयाँ ऐन ल्याउनु अनिवार्य छ ।
यो ऐन आवश्यक छैन
उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष (वस्तुगत)
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन समय सान्दर्भिक छ ?
२०२१ मा बनेको ऐन आज ५ दशक बितिसकेको छ । त्यतिबेला बनाइएका धेरै ऐन परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, यो संशोधन नहुन आश्चर्यजनक हो । यो ऐन त्यति बेलाका लागि ठीकै थियो होला । तर, अहिले समय परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला कुनै पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने अवस्था पनि थिएन । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा विदेशको पैसा नेपालमा आउँछ, नेपालको विदेश जान्छ । यो स्वाभाविक हो । त्यसैले पनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने यो ऐन राख्नै आवश्यक छैन ।
विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध समयानुकूल छ ?
विल्कुलै छैन, अवसरहरू विश्वभरि छन् । २५ वर्षे द्वन्द्वकालले गर्दा अझै पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ । तर, हिजोको दिनजस्तो अहिलेको अवस्था छैन । यदि नेपाली उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न चाहन्छ भने सरकारले निर्बाध रूपमा छूट दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसमा कति लाने के लाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, विदेशमा नेपालीले लगानी नै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । प्रचलित ऐनमा पनि विदेशमा लगानी गर्नै नपाउने भन्ने लेखिएको छैन । गर्न पाइने तर सशर्त भन्ने छ ।
ऐन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
ऐन कार्यान्वयन त भइरहेकै छ । कुनै पनि नेपालीले विदेशमा कारोबार गरेको देखिँदैन । कारोबार भनेको उद्योग राखेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा ऐन कार्यान्वयन भइरहेकै छ । नेपालीले विदेशमा बसेर उद्योग गरिरहेकै छन् । विदेशमा नै कमाएको पैसाबाट गरिरहेका होलान् । तर, नेपालको पैसा विदेशमा लान सहज छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगत्को अभ्यास कस्तो छ ?
मलाई उत्तर कोरियाका बारेमा थाहा छैन । तर, अरू कुनै पनि मुलुकले विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको भन्ने सुनिन्छ ? कसरी गरेका होलान् त ?
मैले यो विषयमा बुझेकै छैन । एनआरएन भएर विदेशमा लगानी गर्न पाउँछ । त्यो हिसाबले गरेको मलाई थाहा छ । तर, बाँकी यसको प्राविधिक पक्ष मैले बुझ्दिनँ ।
अवसरहरू धेरै भएको मैले देखेको छु । सबै नेपाली विदेशमा गएर उद्योगधन्दा, स्कूल, कलेज चलाएका छन् । म आफै विभिन्न मुलुकमा गएँ । त्यहाँ मैले विदेशी लगानी भिœयाउने संस्थाबाट अत्यन्त सकारात्मक सहयोग पाएँ । श्रीलङ्कामा उद्योग राख्ने अनुमति पाएको थिएँ । उनीहरूले नेपालको केन्द्रीय बैङ्कबाट पैसा पठाऊ भने । हामी जग्गा दिन्छौं पनि भनेका थिए । त्यस्तै उनिहरुले श्रीलङ्काली कम्पनीभन्दा फरक रूपमा बस्नु पर्दैन भन्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर, यहाँ आएर बुझ्दा विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले रोक्दो रहेछ । अनौपचारिक बाटोबाट लगानी लैजान सकिन्थ्यो होला, त्यो मैले गरिनँ । आजसम्म पनि मैले विदेशमा उद्योग खोल्ने प्रयत्न गरेको छैन ।
विदेशमा लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन
भाष्करमणि ज्ञवाली, पूर्वकार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैङ्क
नेपालमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था देखिँदैन । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ प्रचलनमा रहेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२)ले यसमा केही छूट दिँदै भनेको छ, उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफा (१)मा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छूट दिन सक्नेछ । त्यसरी छूट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्ने अवस्थासमेत गरेको छ । यदि कसैले विदेशमा लगानी गर्न चाहेमा सोबमोजिम छूट प्राप्त गर्न नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकै हुनुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा दायित्व सृजना हुने गरी कुनै कार्य गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा हाल चालू खाता (करेण्ट एकाउण्ट) परिवत्र्य रहेको छ तर पनि सो खाताअन्तर्गत कतिपय कारोबार अझै नियन्त्रित रहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमण गर्दा अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयभन्दा बढीको सटही लिन सक्दैनन् । पूँजी खाता (क्यापिटल एकाउण्ट) अझैसम्म परिवत्र्य नरहेको विद्यमान अवस्थामा विदेशमा पूँजीगत लगानी गर्न पाइने देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू खाता कारोबारअन्तर्गतका शीर्षकहरूमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२० बमोजिम विदेशी मुद्रा सटही उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, पूँजी खाताअन्तर्गत पर्ने विदेशमा लगानी गर्ने कामका लागि राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था कतै देखिँदैन । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न चाहेमा उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दिनसक्ने छन् । निवेदनका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले सरकारलाई जानकारी गराउँदछ र सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श गरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२ ) बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न छूट दिन सक्नेछ । त्यस्तो छूटको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट विदेशमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रा सटही उपलब्ध गराउँछ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमयसम्बन्धी नियमन व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यससम्बन्धी कुनै नियम जारी गरेको देखिँदैन ।
ऐनको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था धेरै पुरानो भएकोले पुनरवलोकन हुनुपर्छ । त्यस्तै पूँजी खाता परिवत्र्यसमेत गर्न आवश्यक छ । नेपालको हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलर १०–११ अर्ब भएको र उक्त रकम करीब १४ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त भएको भन्ने राष्ट्र बैङ्ककै भनाइ रहेको छ । यस्तो निर्यात आर्जन नगण्य भएको हाम्रो जस्तो देशमा उपर्युक्त कदमहरू चाल्दा निकै नै संवेदनशील भई गहन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध उचित
खगेन्द्र बस्नेत, निर्देशक, विदेशी लगानी
तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ अझै सान्दर्भिक छ ?
मुख्य रूपमा उद्योग विभागले १० अर्बभन्दा कमका प्रत्यक्ष विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले उद्योगहरूमा गर्ने लगानी स्वीकृत गर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को परिधिभित्र रहेर विदेशीले नेपालमा गर्ने लगानी स्वीकृत दिन्छ । नेपालका केही क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । उदाहरणका रूपमा नेपालमा विदेशीले व्यापारमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । हरेक देशले आफ्नो देशमा रहेको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशमा नै लगानी होस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी भएको लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर राख्छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले स्वदेशी पूँजीबाट स्वदेशमै उद्योग व्यवसायको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बनेको जस्तो देखिन्छ । नेपालका उद्योगहरूले परम्परागत किसिमका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने गर्छन् । यस्ता उद्योगको प्रविधि विदेशबाट भिœयाउने गर्छन् । अहिलेसम्म नेपालको उद्योगले नवीनतम किसिमका वस्तु विकास गर्न सकेको छैन । विश्वबजारले ग्रहण गर्न सक्ने गरी नवीनतम किसिमका वस्तुको विकास गर्न नसकेकाले नेपालको उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदा केबल पूँजी पलायन मात्र हुने देखिन्छ । हरेक देशले विदेशमा लगानी गरी त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति आफ्नो देशमा ल्याएका छन् । यस्तो कामले विदेशमा गरेको लगानीका धेरै मात्राको प्रतिफल पुनः सोही देशमा भित्रिन्छ । यस्तो अवस्था नेपालको औद्योगिक विकासमा नदेखिएको सन्दर्भमा यो ऐन उचित नै देखिन्छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ आपसमा मिल्छन् ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ नेपालमा विदेशीको लगानी भिœयाई औद्योगिक तथा आर्थिक विकास होस् भन्ने अभिप्रायले आएको ऐन हो । विश्वका उदाहरणलाई लिने हो भने अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा उद्योग क्षेत्रलाई लिइन्छ । उदाहरणका रूपमा चीन र भारतमा पनि विदेशी लगानी भिœयाएर औद्योगिक विकास गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा यी दुवै ऐन सान्दर्भिक देखिन्छन् । त्यसैगरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ नेपालबाट विदेशमा रकम जान प्रतिबन्ध लगाउने ऐन हो । नेपालकोे चुलिँदो व्यापारघाटा भएको अवस्थामा यो ऐन केही हदसम्म सान्दर्भिक देखिन्छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पुरानो देखिन्छ । २०२१ सालमा बनेको ऐनको प्रावधानलाई समय सान्दर्भिक बनाउनु जरुरी छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न पनि राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धि नहुने क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु नै उचित हुन्छ । तर निरपेक्ष रूपमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा हाम्रो देशमा मात्र भएको ज्ञान, शीप र क्षमतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा विश्वभर नेपालीलाई लगानी गर्न दिने वातावरण सृजना गरी विश्वबजारको पूँजी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय विचार÷विमर्शको मुद्दा हो ।
ऐनको कार्यान्वयन अवस्था र विशेषता
सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता,
विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ मा कार्यान्वयन गर्ने निकाय उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ ले वैदेशिक लगानीको विषय उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको छ । यसैले विदेशमा लगानी गर्ने कुरालाई नियमित गर्ने कार्यमा सो मन्त्रालय नजीक देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३१ ले सो ऐनको अनुसूची १ वा २ मा लेखिएका मुद्दाबाहेक नेपाल सरकारका तर्फबाट चलाइने अन्य मुद्दामा सम्बन्धित कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । यदि कानूनममा नलेखिएको भए नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउने वा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्ने कुनै अधिकारी तोक्न सक्छ । तोकिएको त्यस्तो अधिकारीबाट अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ । त्यस्तो अधिकारी तोकिएको छैन भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबूत प्रमाण सङ्कलन गरीे रायसहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवम् सबूत प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस ऐनअन्तर्गतको कसूर भएको विषयको सूचना वा उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले तोक्नुपर्ने र नतोकेकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुसन्धान गर्न सक्छ । महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमा यो ऐनविपरीत कार्य गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा अदालतमा चलाएको भन्ने तथ्याङ्क रहेको देखिँदैन । यस ऐनको विपरीत कसैले विदेशमा लगानी गरेको भन्ने उजुरी नपरेको वा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित निकायमा नपरेका कारण पनि कुनै मुद्दा नआएको हुन सक्छ । अथवा यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै कुन हो भन्ने कानूनमा स्पष्ट नभएका कारण पनि हुनसक्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले यो ऐन कार्यान्वयन गराउने कुरामा नियमावलीमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न सक्छ वा नेपाल सरकारले यो ऐनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशमा लगानी गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य निषेध गरेको,
यो ऐन नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थाहरूलाई लागू हुने,
कसैले यो ऐनको वा यस ऐनअन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा निजलाई बिगोबमोजिम जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र
यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने ।
ऐन समयानुकल बनाउनु पर्छ
जुरिष्ट एण्ड कम्पनी
विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ समय सान्दर्भिक छ ?
यो ऐन समय सान्दर्भिक छैन । बदलिँदो परिस्थितिमा यो ऐनलाई परिष्कृत गरी २१औं शताब्दीका लागि सुहाउँदो बनाउनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
यस ऐनको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो ऐन प्रभावकारी नरहेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन फितलो हुनु अस्वाभाविक हैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता छ । तर, किन भएको छैन भन्ने विषय बुझ्न सकिएको छैन ।
अहिले पनि नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । कसरी लगानी गरेका होलान् ?
ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसार अनुमति लिएर गरिएको हुन सक्छ । अथवा नेपाल सरकारले लगानी गर्न छूट दिइएको हुन सक्ला । तर, यस्तो विषय बाहिर त्यति आएको सुनिँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतको अभ्यास कस्तो छ ?
एउटा राज्यको नागरिकले सम्बन्धित राज्यको अनुमति नलिई अर्को राज्यमा लगानी गर्नु नागरिकको कर्तव्य र दायित्वअन्तर्गत नपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ ।
निष्कर्षमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो ऐनको प्रभावकारिता छैन । सजायको व्यवस्था न्यून छ । सरकारवादी मुद्दा हुने भए तापनि यो ऐनअनुसारको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने दक्ष अनुसन्धान कर्तासमेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।